अमेरिकीे डलरको भाउ अहिले सम्मकै उच्च | Kendrabindu Nepal Online News
७ चैत्र २०७६, शुक्रबार १३:२०
अमेरिकी डलरको मूल्य फेरी बढेको छ । शुक्रबार डलरको मूल्य १ रुपैयाँ १७ पैसाले बढेको हो । मूल्यबृद्धिसँगै डलरको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार डलरको मूल्य १२० रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको छ । बिहीबार डलरको मूल्य ११९ रुपैयाँ ११ पैसा थियो । लामो समय १ सय १४ को हाराहारीमा रहेको डलर भाउ शुक्रबार १२० रुपैयाँमाथि उक्लिएको हो ।
अमेरिकीे, अहिले सम्मकै उच्च, डलरको भाउ
Prevकारागारका कैदीबन्दीको अवस्था हेरेर छोड्ने तयारी
सवारीमा अनुगमन तीब्र, मापसेको कक्षा लिनु नपर्नेNext
नयाँ उचाईमा डलरको भाउ, कति पुग्यो आज ?
बढ्यो डलरको भाउ, कति पुग्यो आज ?
नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर, डलरको भाउ १२० नाघ्यो
डलरको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च, कति पुग्यो आज ?
दिल्लीमा वायु प्रदूषण अहिलेसम्मकै उच्च